Badeecada Hadiyadaha Shiinaha & Qubayska Spa Basket Hadiyad Loo Sameeyay Liinta urka Bath Set Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Haida
HADIYADDA HORE "Habka wax loo bixiyo ayaa ka qiimo badan hadiyadda" Taasi waa sababta aan u abuurnay xirmooyinka isboortiga ee ugu quruxda badan uguna caansan ee ku jira baakadaha hadiyadeed ee quruxda badan taasoo ka dhigaysa dambiilayaasheena hadiyadaha ah fikradaha hadiyadda No .1 ee xaaska, hooyada, iyo saaxiibada.
1.SHEEG: Liin dhanaan
Udgoon Liin dhanaan ah - Sida cabitaanka galabtii, udgoonkeena liinku waa mid fudud oo wacan. Udgoon udgoon ee liin dhanaanta ayaa waaraya oo waxay hubin doontaa inay ku siiso nasashada aad ugu baahan tahay ee aad u xiiseyneysay!
2.HAMBIYADA HAB-DHAQA HELI SET Ayaa Ka Kooban
-200ml gel qubeys
-200ml xumbada xumbo
-50ml kareemka jirka
-6x15g bambooyin qubeyska
-100g cusbo qubeys ah
-Loofah dib u xoq
-Baal bir ah oo qurxinta lagu dhigo ama lagu kaydiyo.
Isticmaalka wax soo saarka
Macsalaam Fiican si aad u qalajiso maqaarka qalalan. Looshan jirka ayaa nafaqeyn doonta oo qoyn doonta maqaarkaaga adiga oo kaaga tagi doona udgoon fiican, ur jilicsan.
Maydho Jel -
Wax yar oo jel ah mari gacmaha ama isbuunyo jilicsan oo qoyan - si aad uhesho lakab hodan ah oo kareem leh. Waxaad sharad aad dareemi doontaa faraqa.
Ma jiraan wax la mid ah qubeyska xumbo kulul si loo dajiyo murqaha daalan oo loo nasto jirka. Qubayskan xumbada leh ee jilicsan ayaa abuuraya xumbo badan oo xumbo ah wuxuuna uumiyaa oo u jilciyaa maqaarka intaad qoyso.
Ku shub qaddar deeqsinimo leh biyo diiran oo socda. Biyo walaaq si ay u caawiso kala-baxa kristantarrada.
kaliya bamgaaga tuubada qubeyska oo sug firaaqu inuu mashquul noqdo.
Loofah Back Scrubber-Xoqiddan dhabarka leh waxay leedahay laba dhinac, mid waa jilicsan yahay midna waa loofah dusha sare oo ku wanaagsan faafinta. Xaaqilku wuxuu leeyahay gacmo-qabsi, aad uga dhig fudud inaad gaadho dhabarkaaga hoose.
Paraben bilaash ah oo aan lagu tijaabin xayawaanka.
Digniinta ama Xaddidaadda
ISKA ILAALI INDHAHA. HADDII AY SOO SAARTAY SOO SAARKA INDHAHA INDHAHA SI DEG DEG AH OO LOOGU SAMEEYO BIYO Diiran OO NADIIF AH. HADII UU KU SOO BAXO MAQAARKA ISTICMAALKA KHILAAFKA. HADDII AY IRRITATION PERSISSS QAADATO LA XIRIIR DHAKHTARKAAGA.
Xirxirida & Rarista
Waqtiga hogaaminta: 25-45 maalmood
Measadaha Kartoonka: 49 * 45 * 26CM
Dajisaa halkii kartoon: 6sets
Habka lacag bixinta: T / T, L / C
Taariikhda bixinta: 25-45days kadib amarka xaqiiji.
1.Certified: FDA, BSCI, GMPC, ISO.22716, dukaamada tafaariiqda farsamada & kormeerayaasha baayacmushtarka.
2.Qiim tartan & tayo aad u fiican iyo naqshad cusub iyo qaabeyn u gaar ah.
Qaababka qaaska ah & udgoonka gaarka ah.
Adeegga 4.OEM iyo ODM, waxaan ugu hiilineynaa macaamiisha inay soo saaraan waxyaabo cusub oo isbeddel ah.
5.We Waaxda xakamaynta tayada ayaa si gaar ah mas'uul uga ah hubinta tayada dhammaan alaabta ceyriinka ah illaa alaabada la soo gabagabeeyay ee geeddi-socod kasta.
Nafaqeynta Waxyaabaha ay ka kooban tahay qoyaanka muddada-dheer si ay u jilciyaan xitaa maqaarka ugu engega jilicsanaanta, jilicsanaanta iyo dareenka khafiifka ah. Qaacido kasta waa gebi ahaanba dabiici ah, alaab caafimaad iyo badbaado leh had iyo jeer waa ujeedkeena.
waxaan ku kalsoonahay noocyadeena kaladuwan iyo tayada joogtada ah! Dukaan si qurux badan u baakadeeyey hadiyado asxaabta, kuwa aad jeceshahay ama xitaa si aad naftaada ula dhaqanto khibradaada guriga-dhexdiisa!
Hore: Dambiisha Hoyga Hadiyadaha ee Hoyga - Raaxo 7 Qubeys Qubeysan & Jidh loogu talagalay Haweenka
Xiga: Qubeyska iyo Dambiisha Hadiyadaha Jirka ee Haweenka iyo Ragga
Qubeyska iyo Shaqooyinka Jirka oo Lagu Dhejiyay Ubax Ubax F ...
Dhaqida Jirka Dabiiciga ah iyo Maydhashada Maydhista
Bacda Nasashada Udugga ah ee Guryaha Loogu Talagalay Dumarka Ros ...
Nasashada Hadiyada Qubayska ee Loogu Talo Galay Maalinta Hooyooyinka Maalinta Dhalashada ...